နိဗ္ဗာန်လမ်းခန်းကျယ်ပထမထပ် ရောင်း မည်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10060705 အတွက် အာရှ အကျိုးဆောင် သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြည့်မြင်တိုင် ပွဲစားလမ်း အောက်လမ်း တိုက်ခန်းကျယ် ( ၃ ) လွှာ ရောင်းမည်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10057866 အတွက် အာရှ အကျိုးဆောင် သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10046006 အတွက် အာရှ အကျိုးဆောင် သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
အခန်းသစ်နဲ့ အသင့်နေလိုသူတွေအတွက် ကြည့်မြင်တိုင် ကမ်းနားလမ်းအနီးမှာရှိတဲ့ Master Bedroom ( ၁ )ခန်းပါ မီနီကွန်ဒို ရောင်းမည်။...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10031156 အတွက် Myanmar First Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10028363 အတွက် Myint Zu Realestate Service သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10024160 အတွက် Myint Zu Realestate Service သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10018999 အတွက် သီရိသန္းေရႊအိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10014187 အတွက် Zaluckpwint Real Estate Services Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10008204 အတွက် Zaluckpwint Real Estate Services Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10004237 အတွက် Aung Ta Khit Real Estate Service. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်